I-SOS Covid-19: Umama we-MKL ophuma emphakathini kanye nommeli wabantu, ngokusebenzisa KongoLisolo, kuzwakala ukukhala kwensimbi "Abafowethu nodadewethu abathandekayo / abaNsundu, ikakhulukazi nina baseCongo, ngenxa yegciwane leCorona, uMama MKL ikakhulukazi ukuthumela lesi sixwayiso ukuze ulalele futhi ungene ngaphakathi ngokuphelele"… (VIDEO)
Ukubhekana ne-Civid-19, uzithola phakathi kwesando nesikhuni ngenxa yabaholi bakho. Sizokwenza: Kwenziwe ...
Ngubani obangela ukuhunyushwa kweBhayibheli neKoran ezilimini zase-Afrika? E-Afrika, ngakunye ...
Ukuntuleka kokuvela koqobo kwabaholi abamnyama / nabase-Afrika kuvimbela izwekazi ukuba liqhubeke ...
Kungani owesifazane omnyama wase-Afrika kufanele aziqhenye ngalokho ayikho? Mane nje ngoba kuyini ...
I-Covid-19 Imephu Yomhlaba ku-KL ngawe - Chofoza kumephu ukuthola amacala aqinisekisiwe nokufa kwabantu ...
Ukuthula kwakhe kukhathaza umuntu ongaphezu koyedwa: ngokusho kwemithombo evumelana eduze kukamongameli wase-DRC ...
Futhi igciwane leCorona lingahle libe yisilo ukunquma ukunqotshwa kukaMongameli Félix ikakhulukazi, kanye ne-Co ...
Bazimisela abelungu kukho konke nakho konke. Lesi simo sengqondo sokujabha siyohlala nini? Kusukela ukubukeka ...
I-1802: I-Polytechnic "emnyama" engekho i-Napoleon
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 28, 2016 00: 00 Awekho amazwana
i-Polytechnique Lapho uNapoleon enquma ukubuyisela ubugqila ukuhweba ngezigqila kanye nekhodi emnyama emakoloni aseFrance, ngoMeyi 1802, wathatha izinyathelo zokubandlulula "ukuhlanza" ibutho lempi ... Funda kabanzi
Zonke lezi zizindleko nje ezinyangeni eziyisithupha zobuhlobo
Angicabangi nakancane ukuthi kuzoba njani ngemuva komshado, wonke umndeni uzofa indlala! Funda kabanzi
Ubuhle bezinwele zethu… OWesifazane waseTopiya wangaphambi kwamakoloni
Amazing !! Abesifazane be-Black Afrikan Oromo zezinwele zezinwele ngesikhathi se-Pre-Colonial of FREEDOM !! Sibonga uMauro Ghermandi Funda kabanzi
Injabulo ayisiyo ingcebo kuphela
Kubiza malini “ithoyizi” labo? Konke kusekhanda. Bajabule, bathokozela ukuba ndawonye, ​​bayathandana, futhi kukhombisa ukuthi Ngubani okhumbula lo mdlalo ... Funda kabanzi
I-nut Kola noma i-Cola yisithelo semithi ehlukene ye-genus COLA
I-nati ingaba nesisindo esifinyelela ku-25g. I-kola nati inemiphumela emzimbeni womuntu ecishe ifane naleyo ekhiqizwa yi-guarana. Ngokuyisisekelo kwakuyisithelo semvelaphi yase-Afrika ... Funda kabanzi
Umsuka womqondo weqiniso: iqiniso (kusuka kuma-veritas esiLatini, "Iqiniso", elisuselwa ku-verus, "Iqiniso") liyikhwalithi yalokho okuyiqiniso, kungukulingene komqondo, umcabango, ngento yawo, ukwanela kwalokho umuntu akushoyo noma akucabangayo ngalokho okungokoqobo
UPlato ufuna ukuqonda kweqiniso neqiniso uqobo, elibekwe ngaphandle kombuso wemibono nencazelo, kungokwokucabanga nobuhlakani kuphela; okwamaSocrates ... Funda kabanzi
Futhi akekho ozoba nesibindi sokukuphika lokho…. Iqiniso noma amanga?…. Yolisa ubuhle bayo, ubuhle bayo, ubuhle bayo…. Funda kabanzi
Ingxenye edabukisayo ye-Titanic
Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: May 28, 2016 00: 00 Awekho amazwana
Ngiyanitshela ukuthi le ngxenye yenza ngikhale nawe? Funda kabanzi
I-Moringa iyisihlahla esiyingqayizivele esidalwa futhi siyalinywa emazweni amaningi ashisayo
UMoringa: Izikhathi ze-4 ezingaphezulu kwe-calcium kunobisi, i-vitamin C engaphezu kuka-7 kunama-oranges, i-4 engaphezulu kwe-vitamin A kunezinqathe, i-potassium ye-3 ngaphezu kwebhanana ... Funda kabanzi
March 31, 2020 19: 46